अन्नपूर्णमा हुँदैछ पत्थरमाथि खेती | eAdarsha.com
हेमजा । ढुंगामाथि खेती गर्ने भनेको सुन्दा अपत्यारिलो लाग्न सक्छ । किनकि तपाईं हाम्रो गाउँ टोल वा छरछिमेकमा कतिपय खेतीयोग्य जमिनसमेत फालिएर बाँझै छन् ।
कतिपय अवस्थामा जमिन र माटोको महत्वसमेत हामीले बुझ्न सकेनौं । जसले गर्दा व्यावसायिक कृषि को त के कुरा प्रशस्त जमिन हुँदासमेत पेटभरि खाने र परिवार पाल्ने उत्पादनसमेत हामीले फलाउन सकेका छैनौं । खाद्यान्नका लागि पनि परर्निभर नै छौं ।
तर कतिपय नेपाली यस्ता पनि छन् । जसले पत्थरसँग सिँगौरी खेल्दै उत्पादनमा जुट्छन् । अन्नपूर्ण ३ का कुशल पौडेल यस्तैको सूचीमा पर्दछन् । उमेर भर्खरै २४ वर्ष पुग्यो । कृषि विज्ञानतर्फ स्नातक सकेको पनि २ वर्ष भयो । तर पनि उनलाई जागिर खाने इच्छा आएन । बरु फालिएको स्थानीय धारापानी माविको दमदमे (पत्थर) स्थित जग्गा भाडामा लिएर उनी अनौठो तरिकाले खेती गर्न कसिए । त्यसका लागि उनीसहित ८ जनाको समूह यतिबेला लागि परेको छ ।
उनीहरुले खेती गर्ने जमिन पूरै पत्थरयुक्त छ । त्यही पत्थरमाथि माटो, मल र पत्कर (झरेका पात) मिसाएर हाल करिब ८० बोरामा तरुल, रानी गिठा, तिते गिठा, भ्याकुर, पिँडालु लगायत कन्दमुल लगाइएको छ ।
त्यसका साथै उनीहरुले केही माटो भएको स्थानको पहिचानसमेत गरी बाँसको प्रयोग गरेर स–साना गरा निर्माण गरी खेती पनि थालेका छन् । हालसम्म ८ गरामा खेती लगाइएको छ । पत्थरमाथि खेती लगाएको देखेर कतिपय स्थानीय अचम्मित भएका छन् ।केही भने खेतीको तरिकाबारे जिज्ञासा राख्दै छन् ।
अन्नपूर्ण १, सिम्पालीका शिवकुमार सुवेदी खेतीको तरिकाबाट प्रभावित छन् । नयाँ सोचका साथ कृषि उत्पादनमा जुट्न लागेको भन्दै उनले व्यवसायी सफल हुने विश्वास पनि व्यक्त गरे । ‘व्यवसायीको उत्साह प्रशंसनीय छ यसको सिको अन्य ठाउँकाले पनि गर्नुपर्दछ,’ उनले भने ।
यता वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर गुरुङले फालिएको जग्गाको सदुपयोगका निम्ति अन्य स्थानकाले पनि उक्त कार्यको अवलोकन गर्नुपर्ने बताउँछन् । पहिला पहिला पढेलेखेका मान्छे कृषिमा लाग्नुहुन्न भन्ने मान्यता थियो, तर अहिले त्यसमा करिब पूरापुर जस्तै परिवर्तन भएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण पत्थरमाथि गरिएको खेती हो उनले स्पष्ट पारे ।
गुरुङले कृषिमा लाग्ने जो कोहीलाई पनि वडा सहयोग गर्न तयार रहेको पनि जनाए । अब नजिकै रहेको लुम्ले कृषि केन्द्र र ज्ञान केन्द्रमार्फत गरी वडाका युवालाई कृषि पेसातर्फ आकर्षण गर्दछौं गुरुङले भने अब वडामा पर्ति वा फालिएका जग्गामा पनि कुनै न कुनै किसिमको खेती गरिन्छ ।
उक्त कृषि कार्यमा पाउँदुरका कुशलसहित पोखरा सिमलचौरका डा. कुलराज चालिसे, शीतलादेवीका डा.अनील सुवेदी, पत्रकार डा. रामचन्द्र बराल लगायत सहभागी छन् ।
हालसम्म २ लाख बढी खर्च भइसकेको छ । पूरा योजना सफल पार्न २५ लाख बढी लगानी पर्ने अनुमान छ ।
उनीहरुले उक्त कार्यलाई अनुसन्धान केन्द्र÷संस्थानका रुपमा विकास गर्ने सोच पनि बनाएका छन् । जसका लागि स्थानीय धारापानी माविको स्वामित्वको ३० रोपनी पत्थरिलो जग्गा १० वर्षका लागि भाडामा लिइएको छ ।
मासिँदै गएका बालीको संरक्षण गर्ने मुख्य उद्देश्यले अभियान सुरु गरिएको पौडेलले बताए । त्यसका साथै आफूहरुको कामले फालिएको जग्गाको उपभोग कसरी गर्नुपर्दछ भन्ने सन्देश पनि दिने उनको विश्वास छ ।
उक्त समूहले हेपिएको (फालिएको÷फ्याकिएको) जमिनमा हेपिएकै (मासिँदै गएका) बालीको प्रवद्र्घन गर्ने गरी कार्यक्रम सुरु गरेको जनाएको छ । आकाशे पानी र माटोको सन्तुलन मिलाई खेती गर्ने प्रविधि विकास गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य पनि समूहले राखेको छ ।